स्वास्थ्य पेजबाँकेका पत्रकारको पालो कहिले आउँला ? - स्वास्थ्य पेज बाँकेका पत्रकारको पालो कहिले आउँला ? - स्वास्थ्य पेज
बाँकेका पत्रकारको पालो कहिले आउँला ?
नेपालगन्जः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आजबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ‘कोभिशिल्ड’ खोप पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई लगाइएपछि आजबाट पत्रकारलाई लगाउने तयारी भएको हो । आजबाट सुरु भएको यो खोप काठमाडौंका पत्रकार, युएन एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई मात्र लगाइने छ ।
काठमाडौं बाहिरका पत्रकारलाई कहिले लगाउने भन्नेबारे अझै टुंगो छैन् । जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकलपर्सन तेज वलीका अनुसार पत्रकारलाई खोप दिने मन्त्रालयले भने पनि परिपत्र भने आएको छैन् । जस्का कारण बाँकेका पत्रकारले खोप कहिले पाउँछन् टुंगो छैन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले आजदेखि पाँच दिनसम्म अग्रपंक्तितमा काम गर्ने पत्रकारलाई निजामती कर्मचारी अस्पताल नयाँ बानेश्वरबाट खोप दिइने जानकारी दिनुभयो ।